OPPO Digital BDP-103 Blu-ray Disc Player Egwuregwu Nyocha
Ụlọ ihe nkiri Ụlọ Nduzi & Nkuzi
OPPO Digital BDP-103 Blu-ray Disc Player - Ọrụ vidiyo
01 nke 14
OPPO Digital BDP-103 Blu-ray Disc Player - A Lee Na arụmọrụ vidiyo
OPPO BDP-103 Nyocha - HQV Benchmark DVD Video Quality Evaluation Test Disc - List Test. Foto © Robert Silva - Akwadoro na About.com
Iji nyochaa mmemme vidiyo nke OPPO Digital BDP-103, eji m ihe akpọrọ akpụpụta HQV DVD A na-achọpụta site na Silicon Optix (IDT). Ihe nlere ule nwere usoro ihe nlere na ihe oyiyi na-anwale otú onye nhazi vidiyo na Blu-ray Disiki ọkpụkpọ , ọkpụkpọ DVD , TV / video projector, ma ọ bụ Onye Nkiri Ụlọ Ihe nkiri nwere ike ịrụ ọrụ nhazi nhazi ọganihu 480i / 480p kwesịrị ekwesị, na ntụgharị elu iji gosipụta àgwà dị mma ma ọ bụrụ na enwere ọnọdụ dị ala ma ọ bụ isi iyi dị mma.
Ejiri OPPO BDP-103 Blu-ray Disc Player na OPPO BDP-103 Blu-ray Disc Player na-eji ma ihe HDMI ejikọtara na Epson PowerLite Home Cinema 3020e Video Projector (na nyochaa ego) na mkpebi 1080p. Awara OPPO Digital BDP-103 maka mmepụta 1080p ka ihe nlele ahụ gosipụtara arụmọrụ vidiyo nke BDP-103. A na-eduzi nyocha niile site na iji ntọala BDP-103 rụọ ọrụ.
Ihe nchoputa nke egosiputa na gallery a sitere na BDP-103 nke HDMI 1, nke na-eji ihe ntinye vidiyo nke Marvell QDEO, dika nke a tughariri site na Disc Disclaimers nke Silicon Optix HQV DVD.
Rịba ama: Ihe niile nchoputa ahụ gosiri ntụgharị 480i / 480p ma ọ bụ 1080i / 1080p ntụgharị na ike 1080p nke BDP-103. Enweghị m ike inyocha njirimara 4K nke BDP-103, ebe ọ bụ na enweghị m TVK 4K ma ọ bụ ihe ngosi vidio, ma ọ bụ ihe nchọpụta nke ọdịnaya 4K na aka.
E nwetara screenshots na gallery a site na iji Sony DSC-R1 Digital Still Camera. A na-ewere foto na 10-megapixel mkpebi na resized maka ịdebe na gallery a.
Mgbe ị gafere site na Nzọụkwụ a site na Nzọụkwụ na-ele ụfọdụ nlele ule, chọpụtakwara Profaịlụ Mpị na Nyochaa nke OPPO Digital BDP-103 Blu-ray Disc Player.
02 nke 14
OPPO Digital BDP-103 - Nyochagharị / Nyocha Upscaling - Jaggies 1-1
OPPO Digital BDP-103 - Deinterlacing / Upscaling Test Photo - Jaggies Nlereanya 1-1. Foto © Robert Silva - Akwadoro na About.com
Foto dị na peeji a bụ nke mbụ nke ọtụtụ ule e gosipụtara na e mere iji nyochaa arụmọrụ / arụmọrụ nke ihe nkiri vidiyo, dịka nke gụnyere na OPPO Digital BDP-103. A na-akpọ ule a dịka ule Jaggies 1. Ule a na - eji igbe ntanetị nke na - emegharị na mpịakọta 360 degrees. Iji mee ule a, osisi ahụ na-agbanwe agbanwe kwesịrị ịkwado, ma ọ bụ gosipụ ma ọ bụ na-agba agba, ma ọ bụ na-acha uhie uhie, odo, na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke gburugburu. Dika ị na-ahụ, dị ka e gosiri na foto a, ndị na-agbanwe agbanwe na-adị ezigbo mma ka ọ na-agafe na mpaghara odo ahụ ma banye na mpaghara ndụ ndụ. OPPO BDP-103 na enyefe akụkụ nke ule a.
03 nke 14
OPPO Digital BDP-103 - Deinterlacing / Upscaling Trests - Jaggies 1-2
OPPO Digital BDP-103 - Deinterlacing / Upscaling Test Photo - Jaggies Nlereanya 1-2. Foto © Robert Silva - Akwadoro na About.com
E gosipụtara n'elu bụ anya nke abụọ na ule Jaggies 1. Iji mee ule a, osisi ahụ na-agbanwe agbanwe kwesịrị ịkwado, ma ọ bụ gosipụ ma ọ bụ na-agba agba, ma ọ bụ na-acha uhie uhie, odo, na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke gburugburu. Dịka ị nwere ike ịhụ, dịka e gosiri na foto a, osisi ntụgharị ahụ dị mma ka ọ na-agafe na mpaghara ndụ ndụ. OPPO BDP-103 na enyefe akụkụ nke ule a.
04 nke 14
OPPO Digital BDP-103 - Nyochagharị / Nyocha Upscaling - Jaggies 1-3
OPPO Digital BDP-103 - Deinterlacing / Upscaling Test Photo - Jaggies Ihe Nlereanya 1-3. Foto © Robert Silva - Akwadoro na About.com
E gosipụtara na ibe a bụ echiche dị nkenke banyere ule Jaggies 1 na-egosikwa na ihe atụ abụọ gara aga. Dịka ị nwere ike ịhụ, dị ka e gosipụtara na foto a dị nso karị, osisi ahụ na-agbanwe agbanwe dị mma, na ọ bụ naanị ntakịrị nsogbu ọ bụla n'akụkụ ọnụ ya. Nke a pụtara na OPPO BDP-103 gafere ule a. IHE: Blurriness n'ihi na igwefoto shutter ọsọ, ọ bụghị BDP-103.
05 nke 14
OPPO Digital BDP-103 - Deinterlacing / Upscaling Trests - Jaggies 2-1
OPPO Digital BDP-103 - Deinterlacing / Upscaling Test Photo - Jaggies Nlereanya 2-1. Foto © Robert Silva - Akwadoro na About.com
Nke a bụ ule ọzọ nke na-agbatị ikike imechi (mgbanwe 480i / 480p). Nnwale a ma ọ bụrụ na a na-akpọ ya dị ka ule Jaggies 2 ma nwee ogwe atọ na-agagharị na ala na ngwa ngwa. Iji mee ule a, ọ dịkarịa ala otu n'ime esemokwu ga-adị mfe. Ọ bụrụ na ọnụọgụ abụọ dị n'usoro a ga-atụle ka mma, ma ọ bụrụ na usoro atọ dị n'usoro, a ga-atụle nsonaazụ ndị dị mma.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ogwe atọ niile dị mma. Nke a pụtara na OPPO BDP-103 na-agba nyocha a. Otú ọ dị, ka anyị lebakwuo anya.
06 nke 14
OPPO Digital BDP-103 - Nyochagharị / Nyocha Upscaling - Jaggies 2 Nso-Elu
OPPO Digital BDP-103 - Deinterlacing / Upscaling Test Photo - Jaggies Nlereanya 2-2. Foto © Robert Silva - Akwadoro na About.com
Nke a bụ ihe ọzọ, karịa nso-elu, lee ule Jaggies 2 na-egosikwa na foto gara aga. Nnwale a na-eme ka ogwe atọ na-agagharị na ala na ngwa ngwa. Iji mee ule a, ọ dịkarịa ala otu n'ime ogwe ndị ahụ kwesịrị ịdịzie. Ọ bụrụ na ọnụọgụ abụọ dị n'usoro a ga-atụle ka mma, ma ọ bụrụ na usoro atọ dị n'usoro, a ga-atụle nsonaazụ ndị dị mma.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ dịghị otu n'ime eriri ahụ a na-agbanyeghị na njedebe nke ala na-adabere na njedebe. Nke a pụtara na OPPO BDP-103 gafere ule a.
07 nke 14
OPPO Digital BDP-103 - Nyochagharị na Upscaling Ule - Ụkpụrụ Ule 1
OPPO Digital BDP-103 - Deinterlacing / Upscaling Test Photo - Flag Test 1. Foto © Robert Silva - Akwadoro na About.com
Egwuregwu ọkọlọtọ bụ ụzọ dị mma iji nwalee arụmọrụ vidio. Ụkpụrụ ọkọlọtọ United States na-acha uhie uhie, na-acha ọcha, na-acha anụnụ anụnụ, dịka kpakpando na ụtarị, na-enye ihe ịma aka nhazi vidio. Ọ bụrụ na ọkọlọtọ ahụ na-agbagha, a na-atụle mgbanwe 480i / 480p na ntụgharị elu n'okpuru nkezi. Dị ka ị ga-ahụ ebe a (ọbụlagodi mgbe ị pịa maka ikiri ka ukwuu), ọnyá nke ọkọlọtọ dị ezigbo mma n'akụkụ ọnụ nke ọkọlọtọ na n'ime ọnyá nke ọkọlọtọ. OPPO BDP-103 gafere ule a.
08 nke 14
OPPO Digital BDP-103 - Nyochagharị na Upscaling Ule - Flag Test 2
OPPO Digital BDP-103 - Deinterlacing / Upscaling Test Photo - Flag Test 2. Foto © Robert Silva - Na ikikere na About.com.
Nke a bụ anya nke abụọ na ule ọkọlọtọ. Ọ bụrụ na ọkọlọtọ ahụ na-agbagha, a na-atụle mgbanwe 480i / 480p na ntụgharị elu n'okpuru nkezi. Dị ka ị ga-ahụ ebe a (ọbụlagodi mgbe ị pịa maka ikiri ka ukwuu), ọnyá nke ọkọlọtọ dị ezigbo mma n'akụkụ ọnụ nke ọkọlọtọ na n'ime ọnyá nke ọkọlọtọ. OPPO BDP-103 gafere ule a.
Gaa n'ihu foto nke ọzọ maka nke atọ, na ihe ikpeazụ nke ule a ...
09 nke 14
OPPO Digital BDP-103 - Nyochagharị na Upscaling Ule - Ụkpụrụ Ule 3
OPPO Digital BDP-103 - Deinterlacing / Upscaling Test Photo - Flag Test 3. Foto © Robert Silva - Na-enye ikikere na About.com
Nke a bụ nyocha nke atọ na ọkọlọtọ ọkọlọtọ. Ọ bụrụ na ọkọlọtọ ahụ na-agbagha, a na-atụle mgbanwe 480i / 480p na ntụgharị elu n'okpuru nkezi. Dị ka ị ga-ahụ ebe a (ọbụlagodi mgbe ị pịa maka ikiri ka ukwuu), ọnyá nke ọkọlọtọ dị ezigbo mma n'akụkụ ọnụ nke ọkọlọtọ na n'ime ọnyá nke ọkọlọtọ. OPPO BDP-103 gafere ule a.
Na - ejikọta nsonaazụ etiti atọ nke Test Waving Test, o doro anya na mgbanwe 480i / 480p na ike 1080p nke OPPO BDP-103 dị mma.
10 nke 14
OPPO Digital BDP-103 - Nyochagharị na Upscaling Ule - Nzụlite ụgbọala 1
OPPO Digital BDP-103 - Deinterlacing / Upscaling Test Photo - Car Race 1. Foto © Robert Silva - Na-enye ikikere na About.com
Foto dị na ibe a bụ otu n'ime ule ndị na-egosi otú ihe nhazi vidiyo nke OPPO BDP-103 dị n'ịchọpụta ihe dị na 3: 2. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, onye nrụgharịrị vidiyo ga-enwe ike ịchọpụta ma ihe eji eme ihe bụ ihe nkiri (24 okpokolo agba kwa nkeji) ma ọ bụ vidio (30 okpukpu abụọ nke abụọ) ma gosipụta ihe odide ahụ n'ụzọ ziri ezi na ihuenyo, iji zere ihe ndị dị na ya .
N'ihe banyere ịgba ọsọ ụgbọ ala na nnukwu ihe ngosi a na-egosi na foto a, ọ bụrụ na nhazi vidio na mpaghara a dara ogbenye, ihe ngosi ahụ ga-egosiputa ihe ngosi na oche. Otú ọ dị, ọ bụrụ na OPPO BDP-103 nwere nhazi vidio ọma na mpaghara a, a gaghị ahụ Ụdị Omume nke Mkpụrụ ma ọ bụ naanị na-ahụ anya n'oge mbadamba ise nke ịkpụ.
Dị ka e gosipụtara na foto a, a gaghị ahụkarị ụdị ihe ngosi dị ka ihe oyiyi foto na ụgbọ ala ịgba ọsọ ahụ. Nke a na-egosi arụmọrụ dị mma nke OPPO BDP-103 na-eche banyere nhazi ihe nkiri ma ọ bụ ọdịnaya vidio nwere ihe ndabere zuru ezu na ngwa ngwa na-ebugharị ngwa ngwa.
Maka ihe atụ ọzọ nke otu onyinyo a kwesịrị ile anya, lelee ihe atụ nke otu ule a nke OPPO Digital BDP-93 Blu-ray Disc Player si na nyochaa gara aga mee maka nyocha.
Maka nlele nke otu ule a ga - esi ghara ile anya, lelee ihe atụ nke otu nyocha / nyocha dị elu dị ka onye ọhụụ Pioneer BFDP-95FD Blu-ray Disc Player , si na nyochaa ngwaahịa gara aga.
11 nke 14
OPPO Digital BDP-103 - Nyochagharị na Upscaling ule - Ekegharị ụgbọala 2
OPPO Digital BDP-103 - Deinterlacing / Upscaling Test Photo - Carceau 2. Foto © Robert Silva - Akwụsị na About.com
Nke a bụ foto nke abụọ nke "Ule Nwalegharị Ọsọ" nke na-egosi otú akụkụ ọkpụkpọ DVD nke OPPO BDP-103 dị mma nke na-achọpụta ihe dị na 3: 2.
Dị ka e gosipụtara na foto a, a gaghị ahụkarị ụdị ihe ngosi dị ka ihe oyiyi foto na ụgbọ ala ịgba ọsọ ahụ. Dị ka ihe atụ mbụ, OPPO BDP-103 gafere ule a.
Maka ihe atụ ọzọ nke otu onyinyo a kwesịrị ile anya, chọpụta ihe nrite nke otu ule a nke OPPO Digital BDP-93 Blu-ray Disc Player si na nyochaa gara aga maka nyocha.
12 nke 14
OPPO Digital BDP-103 - Nyochagharị na Upscaling Nyocha - Aha
OPPO Digital BDP-103 - Deinterlacing / Upscaling Test Photo - Titles. Foto © Robert Silva - Akwadoro na About.com
E gosipụtara na ibe a bụ ule nke na-enyocha otú onye nhazi vidiyo nwere ike isi chọpụta ọdịiche dị n'etiti vidio na ihe nkiri na-emepụta fim n'otu oge ahụ. Ihe mere nke a ji dị mkpa bụ na mgbe ụfọdụ, a na-etinye ihe osise vidio (na-akpụgharị na okpokoloji 30 kwa nkeji) n'elu ihe nkiri (nke na-agagharị na okpokoro 24 kwa nke abụọ). Nke a nwere ike ịkpata nsogbu dịka nchikota nke ihe abụọ ndị a nwere ike ịkpata ihe ndị na-eme ka utu aha ahụ dịka ma ọ bụ agbajikwa. Otú ọ dị, n'ọnọdụ a, ọ bụrụ na OPPO BDP-103 nwere ike ịchọpụta ọdịiche dị n'etiti utu aha na ihe oyiyi ọzọ, isiokwu ndị ahụ kwesịrị ịdị mma.
Dịka ị nwere ike ịhụ na ihe atụ egosiri n'elu, akwụkwọ ozi ndị ahụ dị mma (ihe nhụjuanya ahụ bụ maka igwefụfụ igwefoto) ma gosipụta na OPPO BDP-103 na-achọpụta na gosipụtara ihe oyiyi aha nke siri ike.
13 nke 14
OPPO Digital BDP-103 - Nkọwapụta Nchịkwa Mkpuchi Ụgwọ
OPPO Digital BDP-103 - Foto nke Mkpuchi Mkpuchi Mkpuchi Nyocha - Ihe Nlereanya 1. Foto © Robert Silva - Na-enye ikikere na About.com
Na ule a, e debere ihe oyiyi ahụ na 1080i, nke Blu-ray Disiki ọkpụkpọ chọrọ ịbaghachị dị ka 1080p . Ihe ịma aka ọzọ bụ ma onye nhazi ahụ ọ nwere ike ịmata ọdịiche dị n'etiti akụkụ ahụ na-aga n'ihu ma na-agagharị nke onyinyo ahụ. Ọ bụrụ na onye nhazi ahụ na-arụ ọrụ ya nke ọma, ebe mkpanaka ahụ ga-adị mma ma a ga-ahụkwa ihe niile dị na ihe oyiyi ahụ n'oge niile.
Otú ọ dị, iji mee ka ule ahụ sie ike karị, oghere ndị dị n'akụkụ nkuku nke ọ bụla bụ nke akara ọcha na ogwe aka na eriri ojii na ọbụna okpokolo agba. Ọ bụrụ na ebubo ahụ nọgidere na-egosi na ndị nhazi ahụ na-arụ ọrụ zuru oke mgbe ọ na-emegharị mkpebi niile nke mbiet mbụ ahụ. Otú ọ dị, oburu na enwere ihe nkedo iji kpoo ma obu bugharia na oji (lee ihe omuma) na nke ocha (lee ihe omuma atu), mgbe ihe omimi vidiyo adigh edozi ihe nile oyiyi.
Dika ị nwere ike ịhụ na ihe atụ foto nke egosiri n'elu, oghere ndị dị n'akụkụ nkuku na-egosipụtakwa usoro. Nke a pụtara na a na-egosipụta ọkwa ndị a n'ụzọ kwesịrị ekwesị ka ha na-egosighi na-acha ọcha ọcha ma ọ bụ na-acha ọcha, ma otu square jupụtara na akara ndị ọzọ. Tụkwasị na nke ahụ, osisi ntụgharị ahụ na-egosi na ọ dị mma.
Nsonaazụ ya na-egosi na BDP-103 na-arụ ọrụ dị mma iji dozie 1080i na 1080p.
Gaa n'ihu foto ikpeazụ nke nsonaazụ ya ...
14 nke 14
OPPO Digital BDP-103 - Nkọwapụta Ntọala Kwụsị Nchọpụta Nchọpụta CU
OPPO Digital BDP-103 - Foto nke Mkpuchi Mkpuchi Mkpuchi Ntụle - Ihe Nlereanya 2 Nso-Elu. Foto © Robert Silva - Akwadoro na About.com
Nke a bụ anya na-ele anya na ntụgharị ihu na ule dị ka a tụlere na ibe gara aga. Edere onyinyo ahụ na 1080i, nke Blu-ray Disc ọkpụkpọ chọrọ ịba nwa dịka 1080p. Nsogbu a na-eche ihu bụ ikike nke nhazi ahụ iji mara ọdịiche dị n'etiti akụkụ ahụ na-agagharị ma na-agagharị nke onyinyo ahụ. Ọ bụrụ na onye nhazi ahụ na-arụ ọrụ ya nke ọma, ogwegharị ahụ ga-adị mma.
Dika ị nwere ike ịhụ na foto a nso-nso nke osisi ntụgharị ahụ, ọ bụ ezigbo (nsogbu nke igwefoto shutter).
Enweghị njigide na ntụgharị ihu na-egosi na BDP-103 dị mma na 1080i na 1080p ka ntụgharị ihu onyinyo, na onyinyo 1080i ruo 1080p mgbe ihe dị na ngagharị.
Nke a bụ nchịkọta nke nyocha ndị ọzọ a na-egosighi na ihe atụ foto ndị gara aga:
Akara agba: Ngafe - Ezi agba na grayscale, ezigbo ihe nlereanya etu esi - ọ bụghị ntutu ma ọ bụ ntụrụndụ.
Nkọwa (mmelite mmelite): PASS
Ibelata mkpọchi: Ngafe
Mkpụrụ ala ojii (nke "buzzing" nke nwere ike ịpụta n'akụkụ ihe): Ife
Mgbapu nke Mgbochi Ntughari (mkpọtụ na ghosting nke nwere ike ịgbaso ngwa ngwa ngwa ngwa): Ngafe
3: 2 ( Ọganihu na-aga n'ihu ) - Nkwụsị
Dabere na nsonaazụ ule ahụ, OPPO Digital BDP-103, na-eleba anya na nhazi vidiyo na upscaling nke ihe nkenke definition DVD (nke nwekwara ike tinye na netwọk na netwọk jupụtara ọdịnaya vidio - ma ọ bụ ihe ọ bụla e mere site na ngwa ngwa ngwa ngwa internet) yana deinterlacing 1080i ọdịnaya na 1080p, nke nwere ike dakọtara na obodo 1080p ngosi vidiyo.
Maka nkọwa ọzọ na OPPO BDP-103 Blu-ray Disiki ọkpụkpọ, tinyere foto dị nso na-ele anya na njirimara ya na onyinye njikọ ya, lelee Ntụleghachi Nyocha na Foto .
Ngwaahịa Ọchịchị - Zụta Site na Amazon
Melite 12/3/13: Gụọ m nyochaa nke OPPO Digital BDP-103D Darbee Edition Blu-ray Disc Player - Ịzụta Site na Amazon.
Ntughari ndu ndu DTV
Tupu ịzụta ihe ntanetị ụlọ Ụlọ ihe nkiri - Ihe ndị bụ isi
Uru nke ịgbakwunye okwu site na iji okwu okwu B Switch
Marantz kpughere NR1607 Ihe ntanetị nke Ụlọ Ntaneti
Onyinye DVD 10 / DVD VHS kachasị mma ịzụta na 2018
Esi Nweta Netflix na 4K
Ndị na-edekọ DVD na-aga, Ugbu a Gịnị?
Otu esi eji VLC anya Elere ihe obula obula na Apple TV
Muta iwu Linux - mezue
Otu esi gbanyụọ ihe ngosi ọhụụ na Mail Windows na Outlook
Free Halloween Clip Art maka Mac
Gbanwee Otú Nbanye Paswọdu Gị ma ọ bụ Aha njirimara maka Onye Nwee
Ịmepụta ma jiri nhazi ihuenyo na Photoshop Elements
Ijikọta HDTV gị n'igbe gị dị elu na iji HDMI
Kedu ihe bụ SFV File?
Kodi: Ihe Ọ bụ na otu esi eji ya
Jiri igwe egwu ka edekọ si na DTV Converter Box
Ị Kwesịrị Ịmalite Blog Gị na Blogger
Gịnị Bụ Ntọala IMAP Zoho Mail?
Nyochaa: Logitech Alert 750e N'èzí Master System
Kọmputa Nche 101 (tm)
Achọrọ m otu antenna pụrụ iche iji nweta redio Redio?
Ụzọ 9 Ịgbasawanye Ndụ Ngwá Ọrụ nke Android gị
Kedu ihe bụ ịkparịta ụka n'Ịntanet Ikuku?
Thermistor Na-efu Nchekwa Sensor
Onye na-ebi ndụ ndụ: Njem zuru ezu
Samsung 850 EVD 500GB SATA 2.5-inch SSD
Ihe ngosi PowerPoint na-ederede Templates